पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छन् यी दश होटल (मूल्यसहित) – Etajakhabar
पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईको रोजाइमा पर्न सक्छन् यी दश होटल (मूल्यसहित)
काठमाडौं, १ चैत । पोखरा भन्ने स्वेदशी र विदेशी पर्यटकका लागि पहिलो रोजाईको आकर्षक गन्तव्य हो । काठमाडौंबाट नजिकको गन्तव्यको साथै सुविधासम्पन्न होटलमा सस्तो प्याकेजमै बस्न पाउने भएकोले पर्यटकलाई तान्ने गरेको छ । भने नजिकबाट हिमाल हेर्न समेत पोखरा पर्यटको आर्कषक गन्तव्य हो । पोखरामा पर्यटकको लागि पूर्वाधार मध्ये होटलको विस्तार आक्रमक रुपमा समेत भएका छन् । जहाँ सस्तो देखि महंगो होटलहरू पोखरामा पाउन सकिन्छ ।
यी हुनसक्छन् तपाईले खोजे जस्ता होटल
टेम्पल ट्रि रिसोर्ट एन्ड स्पा: यो होटल पोखराको फेवाताल नजिकै रहेको छ । एक रातको १० हजार १ सय रुपैयाँ एक जनाको लागि पर्छ । पोखरामा रहेका १ सय ९ वटा होटल मध्ये बेस्ट भ्यालुमा पर्ने उक्त होटल ट्रिप एड्भाइजरीले पोखराका उत्कृष्ट होटलको सूचीमा राख्दै आएको छ ।
होटल क्रिष्टल प्यालेसस् होटल क्रिष्टल प्यालेस लेक साइडमा रहेको छ । २ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ प्रति रातको लागि रुम पाइने उक्त होटलमा सवै सेवा सुविधा होटल पाउन सकिन्छ । ट्रिप एड्भाइजरीले पोखराका १० होटलको सुचीमा क्रिष्टलाई पनि राखेको छ ।
होटल पोखरा ग्रान्ड: पाँच तारे होटल पोखरा ग्रान्ड सुविधासम्पन्न होटल हो । जहाँ स्वदेशी भन्दा पनि विदेशी पर्यटकको लागि आर्कषक होटल हो । एक रातको ९ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेमा पुग्ने उक्त होटलमा पर्यटकले सवै सेवा सुविधा पाउन सक्छन् ।
द सिल्भर ओकास् इन: द सिल्भर ओकास् इन होटल पनि पोखराको उत्कृष्ट सेवा र सुविधा दिने होटलमा पर्छ । होटलमा एक पर्यटकले प्रतिरात २ हजार ६२ रुपैयाँ खर्च गरेमा उत्कृष्ट सेवा सुविधा पाउने छन् । पोखरामा रहेको होटल तारामा एक रातको पर्यटकले जम्मा १ हजार ८ सय ३३ रुपैयाँमै रूम पाउन सकिन्छ । ट्रिप एड्भाइजरीले पोखराका सस्तो तर सेवा सुविधमा उत्कृष्ट होटलको सूचीमा तारालाई राख्दै आएको छ ।
होटल प्युनिसुला: पोखरामा रहेको प्युनिसुला होटल सेवा सुविधामा उत्कृष्ट सेवा दिदैं आएको छ । होटलमा एकरातको २ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ रहेको छ । ट्रिप एड्भाइजरीले सुविधासम्पन्न होटलको सूचीमा उक्त होटललाई राख्दै आएको छ ।
होटल स्प्लेन्डिड भ्यू एन्ड स्पा: पोखरामा रहेको उक्त होटलमा एकरातको १ हजार ६ सय ६६ रूपैयाँ मात्रै रहेको छ । ट्रिप एड्भाइजरीले सुविधा सम्पन्न सस्तो होटलको सूचीमा राख्दै आएको छ ।
होटल ट्राभल–इन: पोखराको लेकसाइडमा रहेको होटल ट्राभल–इन मा पर्यटकले एक रातको जम्मा १ हजार १ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरे पुग्छ । सेवा र सुविधा होटल र सस्तोको सूचीमा ट्रिप एड्भाइजरीले राख्दै आएको छ ।
स्केर्ड भ्याली इन पोखरा: एक रातको १ हजार १० रुपैयाँ मात्रै खर्च गरे पुग्ने उक्त होटल सस्तो होटलको सूचीमा रहेको छ । सस्तो भएपनि सेवा र सुविधा उत्कृष्ट रहेको उक्त होटल ट्रिप एड्भाइजरीले सस्तो होटलको सूचीमा राख्दै आएको छ ।
होटल भ्यु पइन्ट: होटल भ्यु प्वाइन्ट पोखराको लेक साइडमा रहेको छ । पर्यटकले एकरातको जम्मा १ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च गरेपुग्छ । सस्तो र उत्कृष्ट सेवाको सूचीमा उक्त होटललाई ट्रिप एड्भाइजरीले राख्दै आएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ११, २०७५ समय: ९:३७:३०
‘कतिबेला हुन्छ शरीरको हत्या के थाहा ?’ भनेर फेसवुकमा लेखेकी लक्ष्मी केही बेरमै मृत भेटिइन्
घाँस काट्न गएकी हरिनादेवीको लडेर ज्यान गयो, परिवारमा रुवाबासी
न्युक्यासललाई हराउदै लिभरपुल उक्लियो शीर्ष स्थानमा , सलाहले गरे यस्तो कमाल
स्पेनिस ला लिगा : एट्लेटिकोमाथि स्पान्योलको सानदार जित
दिल्लीद्वारा राजस्थान पराजित : राजस्थान बाहिरिए पनि रियान पराग बने सर्वाधिक कम उमेरको अर्धशतक बनाउने खेलाडी
दाउरा टिप्न गएकी सुष्माको रुखले किचेर ज्यान गयो